Cheap Anodized aluminum alloy machining akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
6063 aluminum alloy anodized cnc machining akụkụ
Tụkwasị na nke a, ngwaahịa a nwere nguzogide ejiji dị mma nke ukwuu ma nwee ike iji ya dị ka usoro dị mkpa maka ngwaahịa ndị metụtara ụgbọelu na ikuku. Ihe dị iche n'etiti anodic oxidation na anodic oxidation siri ike: anodic oxidation nwere ike ịcha acha, na mma dị mma karịa anodic oxidation siri ike. Ihe owuwu ihe: Anodic oxidation chọrọ ihe siri ike, na ihe dị iche iche nwere mmetụta dị iche iche eji achọ mma n’elu. Ihe ndị a na-ejikarị eme ihe bụ 6061, 6063, 7075, 2024, wdg, n'etiti ha, 2024. dị ntakịrị karịa n'ihi ọdịnaya dị iche iche nke CU na ihe ahụ. Ya mere 7075 siri ike oxidation bụ edo edo, 6061, 6063 bụ aja aja, mana nkịtị anodized 6061, 6063, 7075 abụghị ọtụtụ ọdịiche, mana 2024 na-adịkarị mfe n'ọtụtụ ntụ ọla edo.
Common ndiiche quality ikpe
A. tụrụ na-apụta n’elu ala. Generallydị ụdị ihe ahụ na-abụkarị ihe na-eme ka ọ ghara ịda mbà na iwe iwe ma ọ bụ ihe dara ogbenye n'onwe ya. Usoro ọgwụgwọ bụ ịmegharị ọgwụgwọ ọzọ. Ma ọ bụ gbanwee ihe.
B. egwurugwu na agba na-egosi na elu. Kinddị ụdị ihe ahụ na - akpata nsogbu anode na - arụ ọrụ. Ọ na-aghọ rụrụ mgbe nghọta, na-eme ka adịghị mma conductivity nke ngwaahịa. Ngwọta, de-ume na re-anodize.
C. elu ahụ na-echifia ma kpụchara akpụ. Ndị ihe ahụ na - abụkarị ihe na - akpata adịghị arụ ọrụ n'oge njem ma ọ bụ nhazi, yana usoro ọgwụgwọ bụ ịlaghachi ọkụ eletrik, Polish na re-energize.
D. na-acha ọcha tụrụ-egosi na elu n'oge dyeing. Ọ bụ mmanụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịghị ọcha n'ime mmiri na-akpata nsogbu a mgbe niile n'oge ọrụ anode.
Akwụkwọ banyere aluminium alloy machining quality standards
1. Ihe nkiri ahụ bụ 5-25um, ekweghị ekwe dị elu karịa 200HV, mgbanwe ngbanwe agba nke nnwale akara ahụ bụ ihe na-erughị 5%.
2. Nnwale nnu nnu karịrị 36 awa, ma nwee ike iru ụkpụrụ CNS karịa 9.
3. Ọdịdị ahụ agaghị emerụ, kpochaa, nwee igwe ojii, wdg. Igwe ihe eji arụ ọrụ nke aluminom agaghị enwe ihe ọ bụla na-adịghị mma dị ka isi ihe, ịcha ụcha, wdg.
Ntughari: Anaghị atụnye akụkụ aluminom, dịka A380, A365, A382, wdg.
Ihe onwunwe Aluminom alloy 6061, 6063, 7075, 2024
Nke gara aga: Aluminom alloy radiator extruded akụkụ
Osote: Black anodized 6061-T6 aluminum alloy CNC machining akụkụ